धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने समय आएको छ «
नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोरोना भाइरस प्रभावितका लागि सम्बोधन भएन । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावितलाई राहत दिने तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पनि धितोपत्र बजारका पक्षहरूलाई अहिलेको अवस्थालाई अत्मसात् गर्दै अघि बढ्न मद्दत गर्ने खालको नै रहेको छ । कोरोना भाइरसका कारण तितरबितर भएको व्यपार–व्यवसायलाई जीवन दिने प्रयास गरेको मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई पनि सम्बोधन गर्न छुटाएको छैन । मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा कर्जाको सावाँ–ब्याज भुक्तानी अवधि कोरोनापीडितको अवस्थाअनुसार वर्गीकरण गरेर ६ महिनादेखि एक वर्षभन्दा धेरै समय दिएको छ ।
लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन नदिनका लागि दीर्घकालीन रिपोको व्यवस्था गरेको छ भने पुँजी कर्जा तथा निक्षेप अनुपातको सीमालाई ८० बाट बढाएर ८५ प्रतिशतमा पु-याएको छ । सेयरधितोको कर्जाको सीमा ६५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ७० पु-याइएको छ । सेयर धितोको मूल्यांकन १ सय ८० दिनको औसत मूल्यबाट झारेर १ सय २० दिनको औसत मूल्यको आधारमा झारिएको छ, जसले बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रमले पनि धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई सुदृढ बनाउन नेप्सेको संस्थागत सुधार र पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति लिएको छ । बोर्डले संस्थागत तथा नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा लगानीकर्ताको बैंक खाता तथा डिम्याट खातासँग आबद्ध गरी पूर्णस्वचालित कारोबार प्रणालीको व्यवस्था गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्योट प्रणाली टिप्लस २ हुने तथा नेप्सेको टे«डिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था समेत नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ ।
धितोपत्र बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता प्रवेश गराई कारोबारको आकार बढाउन तथा दोस्रो बजार मूल्यमा स्थिरता ल्याउन धितोपत्र व्यापारीलाई अनुमति दिनेसमेत नीति तथा कार्यक्रमले व्यवस्था गरेको छ । प्राइभेट इक्विटी फन्ड तथा भेन्चर क्यापिटलजस्ता विशिष्टीकृत लगानी कोषहरू सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने तयारीमा धितोपत्र बोर्ड लागेको छ । धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूको मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी निर्देशिका बनाई लागू गरिने भएको छ । धितोपत्र दोस्रो बजारसम्बन्धी जानकारी र पहुँच देशव्यापी बनाउन धितोपत्र दलाल व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधिलाई प्रमाणीकरण गरी परिचालन गर्न आवश्यक कार्यविधिसमेत बनाउने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रमले गरेको हुनाले आगामी दिनमा धितोपत्र बजार विस्तार हुनेमा दुईमत छैन । समग्रमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रमले धितोपत्र बजारलाई सकारात्मक सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।
यसले धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताको मनोबलमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । तर, कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र नै के हुने हो भन्ने अवस्थाले गर्दा सेयर बजारमा भएका नीतिगत सुधारले मात्र बजारको दीर्घकालीन सुधार सम्भव नहुने देखिन्छ । कोरोना भाइरसको समस्या समाधान भएको खण्डमा धितोपत्र बजार दीर्घकालीन रूपमा विकास हुने बजारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरू बताउँछन् । मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रमले धितोपत्र बजारलाई पर्याप्त सम्बोधन गरेको भए पनि कोरोनाले बजारलाई अलमलमा पारेको बताउने सरोकारवालासँग समग्र बजारको अहिलेको अवस्थाका बारेमा कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :
धितोपत्र दलाललाई एउटै बास्केटमा राख्नु हुँदैन
पूर्वअध्यक्ष, इन्भेस्टर्स फोरम
चालू आर्थिक वर्षको नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति तथा धितोपत्र बोर्डले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लगानीकर्ताको हित र चाहनाबमोजिमको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा पुँजीबजारलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले समय सापेक्ष कर्जा तथा ब्याज भुक्तानीमा सहजीकरणको व्यवस्था गरेको छ । तर, धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम अहिले दोस्रो बजारको समस्या समाधानमा केन्द्रित नभएको हो भन्ने देखिन्छ । अहिले धितोपत्रको दोस्रो बजारको कारोबार प्रणालीमा देखिएका समस्या र बजारको विकासका लागि हालको कारोबार प्रणालीको अवरोधलाई समाधान गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेको देखिँदैन ।
अहिले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सबैभन्दा धरै आलोचित भएको भनेको कारोबार प्रणाली हो । त्यसका लागि नीति तथा कार्यक्रमले कारोबार प्रणालीमा लगानीकर्ताको बैंक खाता तथा डिम्याट खातासँग आबद्ध गरी पूर्ण स्वचालित कारोबार प्रणालीको व्यवस्था गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनेको भए पनि यतिले मात्र उपयुक्त समाधान आउने देखिँदैन । धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्योट प्रणाली टिप्लस २ हुने तथा नेप्सेको टे«डिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउने भनिए पनि कारोबार प्रणालीको आलोचना न्यूनीकरणका लागि मात्र गरेको जस्तो देखिन्छ । यसले बजारको अहिलेको समस्या समाधान हुने देखिँदैन । नेप्सेको कारोबार प्रणालीले लगानीकर्तामा निराशा जगाएको देखिन्छ । यसलाई प्रभावकारी सम्बोधन गरेको खण्डमा बजारको विकास तथा लगानीकर्ताको मनोबल मजबुत हुने थियो ।
नीति तथा कार्यक्रमले धितोपत्र दलाल कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि र सेवा विस्तारको विषयलाई पनि प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । अहिले धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने समय आएजस्तो लाग्छ । सञ्चालनमा रहेका केही धितोपत्र ब्रोकर यथास्थितिमा छन् भने केही आक्रामक रूपमा समयअनुसारको काम गर्न चाहन्छन् । त्यसैले सबै धितोपत्र दलाललाई एउटै बास्केटमा राख्नु हुँदैन । त्यसका लागि ब्रोकरको वर्गीकरण गरे बजारको विकासका लागि सोच्नुपर्ने समय आएको छ । ब्रोकर वर्गीकरण नगर्ने हो भने आगामी दिन ब्रोकरका कारणले पनि बजारको विकासमा अवरोध सिर्जना हुन्छ । केही ब्रोकर आफ्नो सिस्टम राखेर चलाउन चाहन्छन् भने केही ब्रोकरहरू त्योअनुसार जान चाहँदैनन् । त्यसैगरी केही ब्रोकरलाई २ करोडको पुँजी पनि धेरै भएको अवस्था छ भने केही ब्रोकरलाई १० करोडको क्यापिटल पु-याइसकेको अवस्था छ । यो विषयमा सक्दो छिटो सम्बोधन हुनैपर्ने देखिन्छ । त्यसका साथै धितोपत्र दलाल कम्पनीले कर्पोरेट संस्कारको पनि विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोरोनाका कारण विश्वको अर्थतन्त्रको अवस्था नै के हुन्छ भनेर आकलन गर्न नसकिएको अवस्थामा अहिले बजार केही करेक्सन हुँदैमा बजार घट्यो नै भन्न मिल्दैन । लकडाउनपछि खुलेको सेयर बजारमा बढेको थियो नि ! बजार खुल्नेबित्तिकै निरन्तर बढेको बजार अहिले केही करेक्सन भएको हो । १,१८० अंकमा रहेको बजार बढेर १,४८० सम्म पुगेको थियो । कारोबार खुल्नेबित्तिकै करिब २५ प्रतिशतले बजार बढेको हो नि । त्यसैले सामान्य अवस्थामा पनि बजार एक विन्दुबाट अर्को विन्दुमा जाँदाको समयमा पनि करेक्सन हुनेगर्छ । तर, अहिलेको समयमा धेरै जटिल रहेको हुनाले पनि लगानीकर्तामा केही त्रास देखिएकाले बजार घट्दो क्रममा देखिएको हो । अहिलेको समयमा बजार २५ प्रतिशतले बढेपछि स्वाभाविक करेक्सन लिनुपर्ने हो । अहिलेको समयमा आएको करेक्सन नकारात्मक हो भन्न मिल्दैन ।
मौद्रिक नीतिले लगानीकर्ताको मनोबल बलियो भएको छ
अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता संघ
सेयर बजारको संवेदनशीलताको विषयमा लगानीकर्ताको आवाजलाई सरकार तथा नीति निर्माण तहले सुनेको अवस्था छ । विगत दुई वर्षदेखि लगानीकर्ताले बजारको विषयमा विभिन्न आवाज उठाउँदै आएको अवस्था थियो । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तथा धितोपत्र बोर्डको पूर्णरूपमा सम्बोधन गरेको छ । सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको कुरालाई मौद्रिक नीतिमार्फत आएको अवस्था छ ।
धितोपत्र लगानीकर्ताका लागि मुख्य भनेको मौद्रिक नीति नै हो । बजेटले जस्तो व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने भनेको मौद्रिक नीतिले नै गर्ने हो । त्यसले गर्दा मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई गरेको सम्बोधनले लगानीकर्ताको मनोबल बलियो भएको छ । मौद्रिक नीतिले पनि हामीले भनेका कुरा पूर्णरूपमा त सुनेको छैन । तर, निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
लगानीकर्ताले सेयर धितो मूल्यांकनको ८० प्रतिशत कर्जा दिनुपर्ने माग गरेकोमा ७० प्रतिशत बनाएको अवस्था छ । त्यसैगरी १ सय ८० दिनको औसत मूल्यका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्थालाई १ सय २० दिनमा झारेको छ । त्यसैगरी कर्जाको ब्याज तथा सावाँ तिर्ने समय अवधि थप भएको छ । यी व्यवस्थाले सररकारले सेयर बजारलाई पनि संवेदनशील रूपमा लिएको देखिन्छ । अबको पालो भनेको लगानीकर्ताको हो । सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम गरेको छ । तर, अब लगानीकर्ताले सरकारलाई विश्वास गरेर लगानी गर्ने पक्ष बाँकी छ । त्यसका साथै पुँजीबजारमा हरेक किसिमका कम्पनीहरू सूचीकृत छन् । लगानीकर्ताले लगानी गर्दा कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्न हुन्छ-हुँदैन भन्ने विश्लेषण गरेर लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । सूचीकृत कम्पनीका आगामी दिनका योजना विश्लेषण गरेर त्यसबाट हुनसक्ने लाभलाई समेत आकलन गरेर लगानीको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको समयमा धितोपत्र बजारमा आफूले लगानी गर्ने कम्पनीको अवस्था विश्लेषण गरेर लगानी बढाउने नै अवस्था हो । धितोपत्र बजारको विषयमा नीतिगत सम्बोधन भएको केही दिन बजार सूचक बढेको भए पनि पछिल्ला दिनमा बजार नकारात्मक देखिएको छ । यसको कारण भनेको कोरोना भाइरसको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव हो । अझै पनि लगानीकर्ता कोरोनाको त्रासबाट बाहिर आउन सकेको अवस्था छैन । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र पनि ठप्पजस्तो नै छ ।
धितोपत्रको दोस्रो बजारमा बैंक–वित्तीय संस्थाको बाहुल्य रहेको छ । अहिलेको नीतिले बैंक–वित्तीय संस्थाको कर्जाको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्ने समयमात्र पर सरेको अवस्था हो । आगामी दिनमा उद्योग व्यवसाय कसरी अघि बढ्छ भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसैले आगामी दिनमा बैंकहरूको त्यो कर्जा उठ्ने हो-होइन ? कर्जामा समस्या कस्तो देखिने हो ? लगायतका प्रश्नहरूले गर्दा पनि अहिले बजार घट्दो क्रममा देखिएको हो । अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा प्राथमिकतामा परेको मानव स्वास्थ्य हो । त्यसले गर्दा पनि अन्य गतिविधि अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ । आगामी दिनमा कोरोनाको प्रभाव कस्तो रहन्छ, दिन–प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेकाले पनि लगानीकर्ता डराएको अवस्था छ । कोरोनाको समाधान नहुँदासम्म सबै सहज हुन्छ, बजारपछि सुधारको बाटोमा जान्छ । कोरोनाले अन्य सबै क्षेत्रमा असर गरेपछि बजार मात्र चोखो रहन्छ भन्ने हुँदैन । राज्यले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको हुनाले लगानीकर्ताले स्वविवेक प्रयोग गरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ब्रोकर मात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्ने होइन
अध्यक्ष, नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसन
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रमले सेयर बजारलाई सकारात्मक प्रभाव परेको अवस्था हो । आगामी दिनमा पनि नीतिगत सुधारका कामले धितोपत्र बजारलाई सकारात्मक बनाउँदै जाने पनि देखिन्छ । मौद्रिक नीतिका कारण लघुवित्तको सेयर मूल्यमा कमी आएको भए पनि लगानीकर्ताले मनोबल कमजोर बनाउनुपर्ने देखिँदैन । समग्रमा मौद्रिक नीति र नीति तथा कार्यक्रमले बजारलाई सकारात्मक प्रभाव नै पार्ने हो ।
पछिल्लो दिनहरूमा बजारमा देखिएको नकारात्मक प्रभाव भनेको कोरोना भाइरसका कारणले नै हो । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा देखिनुले पनि धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको हुनसक्छ । धितोपत्र दोस्रो बजारसम्बन्धी जानकारी र पहुँच देशव्यापी बनाउन धितोपत्र दलाल व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधिलाई प्रमाणीकरण गरी परिचालन गर्न आवश्यक कार्यविधिसमेत बनाउने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रमले गरेको हुनाले आगामी दिनमा धितोपत्र बजार विस्तार हुनेमा दुईमत छैन । समग्रमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रमले धितोपत्र बजारलाई सकारात्मक सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।
सबैभन्दा पहिला धितोपत्र ब्रोकरको हिजोको अवस्था के थियो र आज के छ भन्ने विषयलाई राम्रोसँग हेर्न जरुरी छ । त्यसका साथै ब्रोकरको आगामी डेस्टिनेसन के हो भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । एकैपटक धितोपत्र ब्रोकर मात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्ने त होइन होला । त्यसका लागि बजार र अन्य पूर्वाधार पनि त्योअनुसार हुनुपर्ने हुन्छ । आगामी दिनमा पनि ब्रोकरहरू कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा विस्तार तथा पूर्वाधार विकास गर्ने विषयमा तयार रहेको अवस्था हो । धितोपत्र ब्रोकरको पुँजीको हिसाबमा पनि बजारको आवश्यकताअनुसारको पुँजीको व्यवस्था पनि गर्न तयार रहेको अवस्था हो । आगामी दिनमा पनि धितोपत्र दलालहरू सम्बन्धित निकायहरूले भनेको खण्डमा काम गर्न तयार पनि छांै । हामीले विगतदेखि भन्दै आएको आधिकारिक प्रतिनिधिको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गरेको खण्डमा बजारको विस्तारमा सहज हुन्छ ।
धितोपत्र दलाल कम्पनी